အစားလြှော့စားစရာ မလိုဘဲ ပိနျသှယျစမေယျ့ နညျးလမျး (7) ခု
HomeKnowledgeအစားလြှော့စားစရာ မလိုဘဲ ပိနျသှယျစမေယျ့ နညျးလမျး (7) ခု
ခန်ဓာကိုယျ သှယျလတြာဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးရှိလို့ လူအမြားစုက ပိနျပိနျသှယျသှယျလေးတှေ ဖွဈခငျြကွပါတယျ။ ပိနျပိနျသှယျသှယျဖွဈခွငျးက ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးရုံတငျ မကပါဘူး။ ကွညျ့လို့လညျး ကောငျးစပေါတယျ။ ကနျြးမာပွီး ပိနျသှယျနခွေငျးက မိမိကိုယျကို တနျဖိုးထားခွငျးပါပဲ။ ခန်ဓာကိုယျလှပခွငျးက မိမိကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိစပေါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ကောကျကွောငျးလေးတှပေျေါပွီးလှနတေဲ့အခါ စိတျအားငယျတာ၊ စိတျဖိစီးတာ၊ စိုးရိမျပူပနျတာတှေ လြော့သှားပါလိမျ့မယျ။ ခန်ဓာကိုယျ သှယျလပြွီး ကနျြးမာခွငျးက သငျဘဝမှာ နှလုံးရောဂါဖွဈနိုငျခကြေို လြော့နညျးစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မလိုခငျြတဲ့ အဆီပိုတှကေို လြှောပဈဖို့တော့ ခကျပါတယျနျော။ ရကျသတ်တပတျ အနညျးငယျတှငျးမှာတောငျ ဆုံးဖွတျခကျြတှမှေားပွီး စားမိစားရာစားရငျ အနညျးငယျဝလာမှာပါ။
အစားတှေ ပွငျးပွငျးထနျထနျ လြှော့စားပွီး အလေးကအြောငျ လုပျတာထကျ အလေးခြိနျတကျဖို့က ပိုလှယျပါတယျ။ တကယျတော့ နစေ့ဉျလုပျရမယျ့ နညျးလမျးလေးတှပေဲ လိုတာပါ။ နစေ့ဉျမှနျမှနျလုပျရငျတော့ အလေးခြိနျတှေ ကသြှားမှာ သခြောပါတယျ။ အလေးခြိနျကသြှားတာ ပြျောစရာ ကောငျးပါတယျ။ အစားကို အပွငျးအထနျ လြှော့စားစရာမလိုဘဲ အလေးခြိနျကစြမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။
1. သငျစားနကြေ အစားအစာပမာဏကို အမြားကွီး လြှော့ခပြဈစရာ မလိုပါဘူး။
ကိုယျအလေးခြိနျ ကစြမေယျ့ အစားအစာတှကေို စားဖို့လိုတာပါ။ ပူစပျစပျ အစားအစာတှကေို ပိုစားပါ။ ပူစပျစပျ အစားအစာတှကေို စားတဲ့အခါ ရမြေားမြား သောကျခငျြလာပါလိမျ့မယျ။ ရမြေားမြားသောကျတဲ့အခါ ဗိုကျပွညျ့သလို ခံစားရပါတယျ။ အစပျတှမှောပါတဲ့ ငရုတျမြိုးက ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အစားစားခငျြစိတျကို လြှော့ကစြပေါတယျ။
2. ခန်ဓာကိုယျမှာ ပိနျခငျြတဲ့နရောတှကေို ဆံပငျလမှေုတျစကျနဲ့ အပူပေးပါ။
လူအမြားစုက ဒီနညျးလမျးကို မသိကွပါဘူး။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ပိုလြှံနတေဲ့ ရဓောတျက ကိုယျအလေးခြိနျကို မြားစပေါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကခြငျြတယျ ဆိုရငျ တဈခါတလမှော ခြှေးထှကျဖို့လိုပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျက ပိနျခငျြတဲ့နရောတှကေို ဆံပငျလမှေုတျစကျနဲ့ အပူပေးပါ။ ဒီနညျးလမျးက အမွဲတမျးဝိတျကစြမေယျ့နညျးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ခဏတာအတှငျး ဝိတျကခြငျြရငျတော့ ဒီနညျးက အကြိုးရှိပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ တဈညလောကျ ကိုယျကပျြ အင်ျကြီဝတျခငျြလို့ ဒီနညျးကို သုံးမယျဆိုရငျ အဆငျပွပေါတယျ။
3. ပနျးကနျပွားရှေးခယျြရာမှာ သတိထားပါ။
ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ရာမှာ ပနျးကနျပွားနဲ့ မဆိုငျဘူးလို့ သငျထငျနပေါလိမျ့မယျ။ တကယျတော့ ဆိုငျပါတယျ။ သငျစားတဲ့ ပနျးကနျပွားထဲမှာ စားစရာမြားလေ သငျဟာပိုပွီး စားမိလလေပေါပဲ။ ပနျးကနျပွား သေးသေးလေးထဲမှာ စားစရာတှထေညျ့ထားရငျ ကောငျးကောငျးစားပွီးပွီလို့ သငျ့ကိုယျသငျ ထငျမိမှာပါ။
4. သဈကွံပိုးခေါကျကို မြားမြားစားပါ။
သဈကွံပိုးခေါကျက အရသာရှိပွီး ရနံ့မှေးရုံတငျ မကပါဘူး။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျလညျး ကောငျးပါတယျ။ သဈကွံပိုးခေါကျက အစားစားခငျြစိတျကို လြှော့ကစြတေဲ့အတှကျ မလိုအပျဘဲ မစားမိတော့ပါဘူး။ သဈကွံပိုးခေါကျက အစာခဖြေကျြမှုကို မွနျစတေဲ့အတှကျ သငျအနားယူနတေဲ့ အခြိနျတောငျမှ အဆီပိုတှကေို လောငျကြှမျးစပေါတယျ။
5. အရေိုးဗဈလကေ့ငျြ့ခနျးတှရေော အရေိုးဗဈမဟုတျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေိုပါ လုပျပါ။
ကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့အတှကျ နစေ့ဉျတကျနတေဲ့ ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးဖို့ လိုပါတယျ။ ကယျလိုရီတှေ မြားမြားလောငျကြှမျးရငျ အဆီလညျးကမြှာပါ။ ကယျလိုရီလြော့အောငျ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု လိုပါတယျ။ အလေးခြိနျကဖြို့အတှကျ လှုပျလှုပျရှားရှားနတော ပိုထိရောကျပါတယျ။ အလေးခြိနျ ကပြွီဆိုရငျ အစားစားခငျြစိတျကိုလညျး ထိနျးနိုငျသှားမှာပါ။
6. ကနျြးမာတဲ့လူတှအေနားမှာ နပေါ။
ကနျြးမာတဲ့လူတှရေဲ့နထေိုငျမှုပုံစံကို သငျသိလာတဲ့အခါ သငျလညျး သူတို့လို ပွုမူနထေိုငျ တတျလာပါလိမျ့မယျ။
24 နာရီအတှငျး တကျနတေဲ့ ကယျလိုရီတှကေ အိပျနတေဲ့အခြိနျမှာ အမြားဆုံး လောငျကြှမျးပါတယျ။ သငျ့အိပျစကျမှုပုံစံက မှားယှငျးနတေယျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အစာခဖြေကျြမှုက ရှုပျထှေးသှားနိုငျပါတယျ။
အစားလျှော့စားစရာ မလိုဘဲ ပိန်သွယ်စေမယ့် နည်းလမ်း (7) ခု
ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျတာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိလို့ လူအများစုက ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးတွေ ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ဖြစ်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းရုံတင် မကပါဘူး။ ကြည့်လို့လည်း ကောင်းစေပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး ပိန်သွယ်နေခြင်းက မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားခြင်းပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်လှပခြင်းက မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကောက်ကြောင်းလေးတွေပေါ်ပြီးလှနေတဲ့အခါ စိတ်အားငယ်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တာတွေ လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျပြီး ကျန်းမာခြင်းက သင်ဘဝမှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလိုချင်တဲ့ အဆီပိုတွေကို လျှောပစ်ဖို့တော့ ခက်ပါတယ်နော်။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်တွင်းမှာတောင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားပြီး စားမိစားရာစားရင် အနည်းငယ်ဝလာမှာပါ။
အစားတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လျှော့စားပြီး အလေးကျအောင် လုပ်တာထက် အလေးချိန်တက်ဖို့က ပိုလွယ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲ လိုတာပါ။ နေ့စဉ်မှန်မှန်လုပ်ရင်တော့ အလေးချိန်တွေ ကျသွားမှာ သေချာပါတယ်။ အလေးချိန်ကျသွားတာ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အစားကို အပြင်းအထန် လျှော့စားစရာမလိုဘဲ အလေးချိန်ကျစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
1. သင်စားနေကျ အစားအစာပမာဏကို အများကြီး လျှော့ချပစ်စရာ မလိုပါဘူး။
ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေမယ့် အစားအစာတွေကို စားဖို့လိုတာပါ။ ပူစပ်စပ် အစားအစာတွေကို ပိုစားပါ။ ပူစပ်စပ် အစားအစာတွေကို စားတဲ့အခါ ရေများများ သောက်ချင်လာပါလိမ့်မယ်။ ရေများများသောက်တဲ့အခါ ဗိုက်ပြည့်သလို ခံစားရပါတယ်။ အစပ်တွေမှာပါတဲ့ ငရုတ်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစားစားချင်စိတ်ကို လျှော့ကျစေပါတယ်။
2. ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိန်ချင်တဲ့နေရာတွေကို ဆံပင်လေမှုတ်စက်နဲ့ အပူပေးပါ။
လူအများစုက ဒီနည်းလမ်းကို မသိကြပါဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပိုလျှံနေတဲ့ ရေဓာတ်က ကိုယ်အလေးချိန်ကို များစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်တယ် ဆိုရင် တစ်ခါတလေမှာ ချွေးထွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ပိန်ချင်တဲ့နေရာတွေကို ဆံပင်လေမှုတ်စက်နဲ့ အပူပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းက အမြဲတမ်းဝိတ်ကျစေမယ့်နည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခဏတာအတွင်း ဝိတ်ကျချင်ရင်တော့ ဒီနည်းက အကျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ညလောက် ကိုယ်ကျပ် အင်္ကျီဝတ်ချင်လို့ ဒီနည်းကို သုံးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
3. ပန်းကန်ပြားရွေးချယ်ရာမှာ သတိထားပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ရာမှာ ပန်းကန်ပြားနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ သင်ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဆိုင်ပါတယ်။ သင်စားတဲ့ ပန်းကန်ပြားထဲမှာ စားစရာများလေ သင်ဟာပိုပြီး စားမိလေလေပါပဲ။ ပန်းကန်ပြား သေးသေးလေးထဲမှာ စားစရာတွေထည့်ထားရင် ကောင်းကောင်းစားပြီးပြီလို့ သင့်ကိုယ်သင် ထင်မိမှာပါ။
4. သစ်ကြံပိုးခေါက်ကို များများစားပါ။
သစ်ကြံပိုးခေါက်က အရသာရှိပြီး ရနံ့မွှေးရုံတင် မကပါဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ သစ်ကြံပိုးခေါက်က အစားစားချင်စိတ်ကို လျှော့ကျစေတဲ့အတွက် မလိုအပ်ဘဲ မစားမိတော့ပါဘူး။ သစ်ကြံပိုးခေါက်က အစာချေဖျက်မှုကို မြန်စေတဲ့အတွက် သင်အနားယူနေတဲ့ အချိန်တောင်မှ အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
5. အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေရော အေရိုးဗစ်မဟုတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပါ လုပ်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် နေ့စဉ်တက်နေတဲ့ ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းဖို့ လိုပါတယ်။ ကယ်လိုရီတွေ များများလောင်ကျွမ်းရင် အဆီလည်းကျမှာပါ။ ကယ်လိုရီလျော့အောင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လိုပါတယ်။ အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတာ ပိုထိရောက်ပါတယ်။ အလေးချိန် ကျပြီဆိုရင် အစားစားချင်စိတ်ကိုလည်း ထိန်းနိုင်သွားမှာပါ။
6. ကျန်းမာတဲ့လူတွေအနားမှာ နေပါ။
ကျန်းမာတဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကို သင်သိလာတဲ့အခါ သင်လည်း သူတို့လို ပြုမူနေထိုင် တတ်လာပါလိမ့်မယ်။
24 နာရီအတွင်း တက်နေတဲ့ ကယ်လိုရီတွေက အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အများဆုံး လောင်ကျွမ်းပါတယ်။ သင့်အိပ်စက်မှုပုံစံက မှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစာချေဖျက်မှုက ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါတယ်။